Voankazo vaovao marobe no masaka, ary ny famokarana gony dia mbola mila mifantoka amin'ny lafiny roa
Amin'ny fahavaratra, melon vaovao sy voankazo misy loko isan-karazany no eny an-tsena, mitondra famatsiana akora betsaka amin'ny tsena fanodinana lalina ny voankazo. Ao amin'ny indostrian'ny fanodinana lalina ny voankazo, ny jam dia iray amin'ireo ampahany lehibe amin'ny tsena. Ny jamam mamy sy marikivy, na aroso amin'ny mofo na afangaro amin'ny yaourt, dia mety hahatonga ny olona hihinan-kanina. Betsaka ny karazana fitohanan'ny olona eny an-tsena, ao anatin'izany ny sakam-boasary, jamam-boasoboka, «blueberry» sns. Miaraka amin'ny fampivoarana ny haitao ara-tsakafo dia afaka namboarina ho azy ny famokarana jam, saingy mila fitandremana ihany ny fiarovana ny sakafo.
Jam dia manana tantara taloha amin'ny fanaovana jam. Taloha, ny fanaovana «macam» dia fomba iray hitehirizana ny voankazo mandritra ny fotoana maharitra. Amin'izao fotoana izao, ny jam dia nanjary sampana lehibe eo amin'ny tsenan'ny fanodinana lalina ny voankazo. Ny antontan'isa avy amin'ny Departemantan'ny Fikarohana momba ny Statista dia mampiseho ny varotra jamam, jellies ary james kanadiana isan-tsokajy nandritra ny 52 herinandro nifarana tamin'ny 6 Janoary 2016. Nandritra io vanim-potoana io dia manodidina ny 13,79 tapitrisa dolara ny varotra Marmalade.
Na dia mitombo aza ny haben'ny varotra eny an-tsena dia manatsara hatrany ihany koa ny fizotry ny famokarana jam. Ny kalitaon'ny akora voankazo no lakilen'ny famokarana jam. Noho izany, ny voankazo dia tokony alahatra alohan'ny famokarana. Ny voankazo dia voasivana amin'ny alàlan'ny milina fanasokajiana kalitao voankazo, voasivana ny voankazo ratsy, ary akora akora avo lenta no ampiasaina hamokarana.
Rehefa vita ny fanasokajiana ny akora dia hiditra ara-dalàna ny rohy famokarana jam. Ny fizotry ny famokarana jam dia handalo amin'ny dingana fanasana voankazo, fanapahana, fikapohana, fisakafoanana mialoha, fifantohana, fanamasinana, fanamorana, sns. Ireo fitaovana mandeha ho azy tafiditra ao anatin'izany ny milina fanasan-doha, ny milina fanapahana voankazo, ny milina mikotrika, ny fandrahoana mialoha ny sakafo milina, concentrator, milina famenoana famehezana, vilany fanamafisam-po ambony, sns. Noho ny fanampian'ireto fitaovana tena mandeha ho azy ireto dia nohatsaraina tsara ny diplaoma amin'ny famokarana jam, izay ahafahan'ny mpanjifa manana kalitao avo kokoa.
Raha ny vaovao navoakan'ny rafitra fampitandremana haingana sy haingana ny sakafo sy sakafo an'ny Vondrona Eropeana farany teo dia nisy saosy blueberry an-trano iray tany Alemana tsy nahomby tamin'ny kalitao sy ny fiarovana azy, ary flakes fitaratra no niseho tamin'ny vokatra. Ireo mpanamboatra jamina eto an-toerana dia tokony handray izany koa ho fampitandremana, mifehy fatratra ny tontolon'ny famokarana sy ny fizotry ny famokarana ary mitandrina.
Voalohany indrindra, ny orinasa dia tokony hisoroka ny fandotoana amin'ny tontolon'ny famokarana. Ny atrikasa famokarana dia tokony hatsangana ho atrikasa madio izay mifanaraka amin'ny fenitra. Tokony hatsangana eo am-baravarana koa ny fandroana rivotra mba hisorohana ny fandotoana ateraky ny fidiran'ny mpiasa sy ny fivoahany ny atrikasa. Faharoa, ilaina ny manadio tanteraka ny fitaovam-pamokarana, ary mampiasa ny rafitra fanadiovana CIP mba hanadio sy hanadio ireo fitaovana famokarana ara-potoana mba hisorohana ny fandotoana ny sisa tavela. Ankoatr'izay, ny fanaraha-maso ny vokatra amin'ny vokatra dia tsy azo odian-tsy hita. Ny fitaovana fanaraha-maso ny kalitaon'ny sakafo sy ny fiarovana dia tokony hampiasaina hijerena ireo entana azo antoka. Ohatra, ny fitaovana fizahana vatana ivelany taratra X dia afaka manakana ny fitohanana misy satroka fitaratra tsy hiditra amin'ny tsena.
Miaraka amin'ireo mpanjifa taorian'ny taona 90 niorina tsikelikely ny vatan'ny tsena, nisokatra bebe kokoa ny tsenan'ny mpanjifa ho an'ny indostrian'ny jam. Ho an'ireo mpanamboatra jam, raha te-hanapaka ny ampihimamba izy ireo, dia mila mampiasa fitaovana famokarana mandeha ho azy isan-karazany koa izy ireo mba hanatsarana ny fari-pahaizana amin'ny famokarana automatique, ary hijerena akaiky ny fahadiovana sy ny fiarovana ara-tsakafo, ary hanatsara ny fifaninanana feno an'ny vokatra amin'ny lafiny maro. .